“Hazard wuxuu u baahnaa kooxda sida Real Madrid oo kale ah” – Zinedine Zidane – Gool FM
(Madrid) 20 Luulyo 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard, wuxuuna sheegay inuu rajo weyn ka qabo xilli ciyaareedka soo socda.
Dhiinaca kale Zinedine Zidane ayaa tilmaamay in Eden Hazard uu u baahnaa ku biirista garoonka Santiago Bernabéu muddo dheer.
Hadaba Zidane ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday kahor kulanka saaxiibtinimo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich wuxuu sheegay:
“Hazard wuxuu u baahnaa kooxda sida Real Madrid oo kale ah, kooxdan waxa ay leedahay wax gaar ah, ciyaartoyda kaliya ayaa ogaanaya”.
“Markii aan halkan imaanayay waxaan ahaa 29 jir, markaas kaddib waan fiicnaaday, waxaan ku qaatay waqti cajiib ah, isla sidaas waxay ku khuseysaa Eden Hazard”.
“Waxaan u maleyneynaa inuu fiicnaan karo, wuxuu cadeeyay inuu sidaas xiiseenayo, wuxuu dhaliyay goolal badan oo kooxda Chelsea ah, wuxuu sameeyay isbadal, haatan wuu nala joogaa, waana ka faa’iideysan doonaa”.
“Si aad ah ayaan u arkay isaga, wuxuu leeyahay tayo xoogan, wuxuu qaban karaa shaqo fiican, ma sheegi karo inuu ciyaari doono kulanka bari, waxaan arki doonaa sida aan u isticmaali karno ciyaartoyda oo dhan”.